R/Rooble oo kulankii ugu horeeyay la qaatay Guddiyada Doorashada & Xalinta Khilaafaadka | Dhacdo
Home Wararka Maanta R/Rooble oo kulankii ugu horeeyay la qaatay Guddiyada Doorashada & Xalinta Khilaafaadka
R/Rooble oo kulankii ugu horeeyay la qaatay Guddiyada Doorashada & Xalinta Khilaafaadka
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble oo howl-geliyey Guddiyada Doorashooyinka Heer Federaal ee Maamulka iyo Khilaafaadka ayaa la wadaagay muhiimadda ay leedahay masuuliyaddan taariikhiga ah ee ay guddiyadan ka sugayaan shacabka Soomaaliyeed.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa sheegay in dhammaan Xubnaha Guddiyada Doorashooyinka Heer Federaal lagu soo xulay aqoontooda iyo in dalka ay u horseedi karaan doorasho daah-furan oo cadaalad ku saleysan, kana tarjumeysa horumarka dalka iyo sii amba qaadidda dowladnimadeenna, iyadoo la ilaalinayo qoondada haweenka ee 30%.
“ Waxaa la idinka soo xushay bulshada Soomaaliyeed qeybaheeda kala duwan, si aad u hoggaamisaan doorashooyinka oo la idinku aaminay masuuliyadaas, waxaa la idin kaga fadhiyaa inaad si caddaalad iyo hufnaan leh u hoggaamisaan, idinkoo ilaalinaya qoondada haweenka ee 30%.”
Sidoo kale, Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa ka warbixiyey dadaalka Xukuumaddu ay ku bixinayso hirgelinta doorasho ku qabsoonta wakhtigeeda, kuna saleysan Heshiisyadii Doorashooyinka ee Muqdisho iyo Samareeb ay ku kala saxiixdeen Madaxda heer Federaal iyo heer Dowlad Goboleed.
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda oo kula dardaarmay Guddiyada Doorashooyinka heer Federaal in ay cadaalad iyo daacadnimo ku hirgeliyaan doorashooyinka 2021 ayaa Alle uga rajeeyey in uu ku guuleeyo howshan Qaran ee loo xilsaaray.
Previous articleWararkii ugu dambeeyay qarax ka dhacay maqaayad ku taallo Lafoole
Next articleMadaxweyne Ku xigeenka Hirshabelle oo gaaray Magaalada Beledweyne